3 तरिकाहरू जैविक मार्केटिङले तपाईंलाई 2022 मा तपाईंको बजेटबाट अधिकतम बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। Martech Zone
मार्केटिङ बजेट6मा कम्पनी राजस्वको 2021% को रेकर्ड न्यून मा झर्यो, 11 मा 2020% बाट तल।
गार्टनर, वार्षिक CMO खर्च सर्वेक्षण २०२१
सधैं जत्तिकै उच्च अपेक्षाहरूको साथ, अब मार्केटरहरूको लागि खर्च अनुकूलन गर्ने र उनीहरूको डलर विस्तार गर्ने समय हो।
कम्पनीहरूले मार्केटिङमा थोरै स्रोतहरू छुट्याएर - तर अझै पनि ROI मा उच्च प्रतिफलको माग गर्दछ - यो अचम्मको रूपमा आउँदैन। अर्गानिक मार्केटिङ खर्च बढिरहेको छ विज्ञापन खर्चको तुलनामा। अर्गानिक मार्केटिङ प्रयासहरू जस्तै खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) सशुल्क विज्ञापनहरू भन्दा बढी लागत-प्रभावी हुने प्रवृत्ति। बजारहरूले खर्च गर्न बन्द गरेपछि पनि तिनीहरूले परिणामहरू प्रदान गर्न जारी राख्छन्। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, अपरिहार्य बजेट उतार-चढावहरूबाट जोगाउनको लागि अर्गानिक मार्केटिङ एउटा स्मार्ट लगानी हो।
त्यसोभए, सूत्र के हो? तपाईंको बजेटबाट धेरै भन्दा धेरै प्राप्त गर्न र जैविक मार्केटिङ पहलहरू सुधार गर्न, मार्केटरहरूलाई विविध रणनीति चाहिन्छ। च्यानलहरूको सही मिश्रणको साथ-र एसईओ र केन्द्रीय फोकसको रूपमा सहयोगको साथ-तपाईं ग्राहकको विश्वास र राजस्व बढाउन सक्नुहुन्छ।
किन अर्गानिक मार्केटिङ?
मार्केटरहरूले प्रायः तत्काल परिणामहरू प्रदान गर्न दबाब महसुस गर्छन्, जुन सशुल्क विज्ञापनहरूले डेलिभर गर्न सक्छन्। जबकि अर्गानिक खोजले तपाईंलाई भुक्तान विज्ञापनहरू जत्तिकै छिटो ROI प्राप्त गर्न मद्दत नगर्न सक्छ, यसले योगदान गर्दछ सबै ट्र्याकयोग्य वेबसाइट ट्राफिकको आधा भन्दा बढी र लगभग प्रभाव पार्छ सबै खरिदहरूको 40%। अर्गानिक खोज भनेको मार्केटिङ सफलताको दीर्घकालीन चालक हो जुन ब्यापार बृद्धिको लागि आवश्यक छ।
एक जैविक वृद्धि रणनीतिले मार्केटरहरूलाई ग्राहकहरूसँग दिगो सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसर पनि प्रस्तुत गर्दछ। Google मा प्रश्न प्रविष्ट गरेपछि, 74% उपभोक्ताहरू विगतका सशुल्क विज्ञापनहरू तुरुन्तै स्क्रोल गर्नुहोस् र तिनीहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिन थप विश्वसनीय जैविक परिणामहरूमा भर पर्नुहोस्। डाटा झूटो होइन - जैविक खोज परिणामहरूले सशुल्क विज्ञापनहरू भन्दा धेरै ट्राफिक ड्राइभ गर्दछ।
ड्राइभिङ ब्रान्ड जागरूकता र ग्राहक विश्वास को फाइदाहरु परे, जैविक मार्केटिंग अत्यन्त लागत-प्रभावी छ। सशुल्क विज्ञापनहरूको विपरीत, तपाईंले मिडिया प्लेसमेन्टहरूको लागि तिर्नुपर्ने छैन। तपाईंको जैविक मार्केटिङ लागतहरू प्रविधि र हेडकाउन्ट हुन्। उत्कृष्ट अर्गानिक मार्केटिङ कार्यक्रमहरू इन-हाउस टोलीहरूद्वारा संचालित हुन्छन्, र तिनीहरूले मापन गर्न इन्टरप्राइज-ग्रेड प्रविधि प्रयोग गर्छन्।
सशुल्क विज्ञापनहरू विगतको कुरा होइनन्, तर अर्गानिक मार्केटिङ भविष्यको ठूलो हिस्सा हो। यो रूपमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ गुगलले २०२३ मा तेस्रो-पक्ष कुकीहरू हटाउने योजना बनाएको छ, सशुल्क विज्ञापनहरूको प्रभावकारिता घटाउँदै। तपाईंको मार्केटिङ योजनामा ​​SEO जस्ता जैविक पहलहरू समावेश गरेर, तपाईंले व्यापार उद्देश्यहरू पूरा गर्न र उच्च ROI प्राप्त गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
२०२२ मा अर्गानिक मार्केटिङ रणनीतिहरू सुधार गर्नुहोस्
जैविक मार्केटिङले प्रदान गर्ने मूल्यले यसलाई शक्तिशाली उपकरण बनाउँछ, विशेष गरी सीमित मार्केटिङ बजेट भएका संस्थाहरूका लागि। तर जैविक वृद्धि सही रणनीति संग मात्र सफल हुन्छ। 2022 मा संगठनहरूको मार्केटिङ प्राथमिकताहरू कहाँ छन् गेज गर्न, कन्डक्टर 350 भन्दा बढी मार्केटर सर्वेक्षण वर्षको लागि तिनीहरूको योजनाहरू बारे जान्न र खर्च गर्ने प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्न।
र, सर्वेक्षण अनुसार, अर्को १२ महिनामा डिजिटल नेताहरूका लागि शीर्ष प्राथमिकताहरूमा वेबसाइट प्रयोगकर्ता अनुभव (UX), सामग्री मार्केटिङ, र टोलीहरू बीच बलियो सहयोग।
यसलाई ध्यानमा राख्दै, यहाँ छ कि तपाइँ कसरी तपाइँको पहलहरू अर्को स्तरमा लैजान सक्नुहुन्छ र तपाइँको मार्केटिङ बजेटबाट अधिकतम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
SEO को शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्। सफल मार्केटिङले खोजकर्ताहरूलाई उनीहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिने सामग्री प्रदान गर्दछ — जसलाई हामीले सन्दर्भ गर्छौं ग्राहक-पहिलो मार्केटिङ। दुबै देखि B2B र B2C निर्णय-निर्माताहरूले सामान्यतया तिनीहरूको आफ्नै अनुसन्धानको साथ आफ्नो खरिद यात्रा सुरु गर्छन्, यो SEO मा लगानी गर्न लायक छ। तर कुञ्जी शव्द स्टफिङले खोजी क्रम बढाउँदैन। खोज इन्जिनहरूले वेबसाइटको सामग्रीलाई प्रभावकारी रूपमा अनुक्रमणिका गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न कीवर्ड अनुसन्धान र प्राविधिक अडिटहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्।
प्रभावलाई अधिकतम बनाउनको लागि, एक जैविक मार्केटिङ प्लेटफर्ममा लगानी गर्नुहोस् र एसईओ रणनीतिहरूको साथ च्यानलहरूमा सामग्रीमा कम्पनी-व्यापी स्थिरता सुनिश्चित गर्न इन-हाउस SEO टोलीमा लगानी गर्नुहोस्।
उत्कृष्ट UX को लागि सहकार्य गर्नुहोस्। अनुसार डिजिटल नेताहरूले, २०२२ मा तपाईको ब्रान्डको वेबसाइटको लागि सकारात्मक UX कायम राख्नु सर्वोपरि छ — तर यो सहकार्य बिना सम्भव छैन। वेब, SEO, र सामग्री भूमिकाहरूमा काम गर्नेहरूले अन्य भूमिकाहरूमा व्यक्तिहरूलाई सहयोगी भएको भेट्टाए समय को 50% भन्दा कमe। यो विच्छेदनले सजिलैसँग डुप्लिकेट काम, बाधाहरू, र असंगत SEO अभ्यासहरूको परिणाम हुन सक्छ। सफल UX पहलहरूले विभागहरू बीच नियमित सञ्चार समावेश गर्दछ, संगठनात्मक साइलोहरू तोड्ने आवश्यकतालाई हाइलाइट गर्दै। उत्कृष्ट UX को साथ थपिएको बोनस? यो तपाईंको गुगल खोज श्रेणी सुधार गर्दछ.
परिणामहरू मापन गर्नुहोस्। हाम्रो सर्वेक्षणले 2022 मा एसईओ कार्यक्रमहरूको सफलता नाप्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको एउटा साझा विषयवस्तु हो। SEO प्रविधिहरू र अभ्यासहरूको प्रभावकारिताको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नाले तपाईंको प्राथमिकताहरूलाई सूचित गर्न सकिन्छ।
आफैलाई एक पक्ष दिनुहोस्: अघि तपाइँको एसईओ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै, तपाइँ कुन मेट्रिक्स निगरानी गर्नुहुन्छ (जस्तै, ट्राफिक, किवर्ड रैंकिंग, र बजार साझेदारी) र तपाइँ कसरी परिणामहरू मापन गर्नुहुन्छ भनेर निर्धारण गर्नुहोस्। यसले तपाइँलाई तपाइँको सामग्री सुधार गर्न र राम्रो काम गर्ने पहलहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्षम बनाउँछ - तपाइँको समय र पैसा बचत गर्दछ।
कम गरिएको मार्केटिङ बजेटले 2022 को लागि कम गुणस्तरको मार्केटिङ योजना बनाउनु पर्दैन—तपाईँले आफ्ना स्रोतहरू अप्टिमाइज गर्न आवश्यक छ। बलियो रणनीति र अर्गानिक मार्केटिङमा ध्यान केन्द्रित गरेर, तपाईं राजस्व चलाउँदा ग्राहकको विश्वास र ब्रान्ड जागरूकता निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।
थप सिक्न रुचि छ? कन्डक्टरको पछिल्लो रिपोर्ट हेर्नुहोस्:
२०२२ मा अर्गानिक मार्केटिङको अवस्था
टैग: 202020212022वार्षिक cmo खर्च सर्वेक्षणसञ्चालककोगार्टनरमार्केटिंग बजेटजैविक विकास रणनीतिजैविक मार्केटिंगजैविक खोज मार्केटिङमार्केटिंग लगानी फिर्तारोमीखोज इन्जिन अनुकूलनखोज इन्जिनएसईओअर्गानिक मार्केटिङको अवस्थाux